Chọpụta obodo mara mma kachasị mma na Sierra de Huelva | Akụkọ Njem
La Sierra de Huelva Ọ dị na mgbago ugwu ahụ ma ọ bụ mpaghara ndị njem nlegharị anya, ebe ọ bụ ụlọ nke Sierra de Aracena na Picos de Aroche Natural Park. Mpaghara a zuru oke maka njem na nleta na ụzọ ndị a raara nye ọdịdị ndị gbara ya gburugburu, mana ị ga-efunahụ n'ime obodo ya mara mma, ebe ị nwere ike ịchọta ọtụtụ akụkọ ihe mere eme nke mpaghara.
na obodo kacha mma mara mma na Sierra de Huelva Ha nwere ihe ha ga-ahu, dika ha bụ obodo mara mma, ha di nma maka ngwụcha izu. N'otu ụbọchị ị pụrụ ịhụ ihe karịrị otu, ịmara ebe nke Sierra de Huelva.
5 Almonaster na Real
6 Linares nke Sierra
7 Nnukwu nchịkọta
Anyị na-amalite na obodo na-enye eke ogige aha ya na bụ otu n'ime ndị kasị touristic obodo na Sierra. Ọ bụ isi obodo mpaghara ahụ ma nye a mma ochie obodo ebe ị ga-efu, nke ụlọ Almohad mara mma nke mara mma malitere na narị afọ nke XNUMX. Na obodo a ị ga-agbadata na Gruta de las Maravillas, ọgba ndị bara nnukwu uru nwere stalagtites na stalagmites. N'ime obere obodo a nwekwara Museum nke Ham, otu n'ime ngwaahịa ndị bụ isi ugwu a, nke anyị nwekwara ike ịnwale n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantsụ localụ dị n'ógbè ahụ. Echefula ileta thelọ Ọrụ Ntugharị nke ogige okike ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmatakwu banyere gburugburu ebe obibi nke ugwu.
Aroche na-akpọkwa aha ya na ogige okike ma pụta maka ịnọ n'ugwu, na-elele ebe nke mbụ bụbu obodo Rome bara ọgaranya, ya mere, ihe ochie bụ nke a hụrụ na gburugburu ebe. Na Obodo Hispano-Roman nke Turóbriga Ọ dị na Lanos de la Belleza ma bido na XNUMX narị afọ BC. C. N'ebe dịpụrụ adịpụ nke Aroche ị nwere ike ịhụ Almohad ochie site na narị afọ nke XNUMX, n'ime nke e mepụtara bullring na narị afọ nke XNUMX. Ọzọ nleta nleta na obodo a bụ peculiar Museum nke Rosary, nke dị na Guinness Book of Records maka inwe ọtụtụ puku rosaries si n'akụkụ ụwa niile.
O doro anya na obodo a ị metụlarị. Ee, anyị na-ezo aka jabugo ham, aha a si n'obodo a, ebe ị nwere ike ịchọta ọtụtụ ebe a raara nye mmeputa ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị naanị ebe a. Na obodo a, ọ bụghị ihe niile bụ ham, ị nwekwara ike ịga na saịtị mgbe ochie nke Cueva de la Mora, nke sitere na Paleolithic.
Near Alájar anyị na-ahụ echiche nke Nkume nke Arias Montano, site na nke ị nwere echiche dị egwu banyere Sierra de Huelva. Obodo ahụ mepere emepe sitere na oge Arab, yana nhazi nke anaghị adị n'etiti ụlọ ọcha. Ebe izu ike iji nwee ọmarịcha obodo.
Na Almonaster la Real ị nwere ike ịnụ ụtọ ihe siri ike ịchọta, nke na-enye amara ọzọ. Mgbidi obodo na nnukwu ụlọ ụbọchị sitere na oge Moorish. Agbanyeghị, ihe kachasị mkpa ha nwere dị n’ime ogige a, ọ bụkwa otu n’ime ha alakụba ime obodo na mba anyị. N'ime obodo ị nwekwara ike ịhụ ụka nke San Martín, n'ụdị Gothic-Mudejar. Iji nwee echiche kachasị mma, ị nwere ike ịrịgogogo kachasị na mpaghara ahụ, Cerro de San Cristóbal, nke dị nso. Leekwa ubi vaịn kachasị elu na mpaghara niile.
Linares nke Sierra
Linares de la Sierra na-bụ ahụkarị obodo nke mpaghara a nke Huelva. Ọ bụ otu n'ime obodo ndị pere mpe ma ọ bụ n'etiti ndị kachasị mma n'ihi na ọ nwere amara niile, ahapụbeghị ụdị ugwu. N'ebe a ị nwere ike ịhụ ala dị larịị, ụfọdụ okwute na-akpụ etu esi eme okwute ma dịkwa n'ihu ọnụ ụzọ ụlọ ndị ahụ. N'ime obodo a, ị ga-anụrị ụtọ ịgagharị na-achọpụta isi iyi ọdịnala ya ma ọ bụ ụlọ ochie ochie, yana ụlọ ndị mara mma.
Cumbres Mayores bụ ebe ọzọ ị nwere ike ịnụ ụtọ ntakịrị akụkọ ntolite n'otu oge dị ka obodo ọdịnala mara mma ma dịkwa jụụ nke ka na-ejigide amara ya niile. Nke a bụ ebe nnukwu ụlọ nke Sancho IV, ebe e wusiri ike iji chebe ebe ahụ pụọ na mwakpo ndị Portuguese. Ọ malitere na narị afọ nke XNUMX. Na Disemba ị nwere ike ịnụ ụtọ oriri gastronomic 'Taste Cumbres Mayores' n'obodo ahụ, nke nwere oke ọ nwere na ọ na-arụ nnukwu efere jabugo kachasị n'ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Obodo ndị kachasị mma na Sierra de Huelva